Madheshvani : The voice of Madhesh - अहिलेसम्म महाधिवेशन नहुनु दुर्भाग्य : लक्ष्मण लाल कर्ण
अहिलेसम्म महाधिवेशन नहुनु दुर्भाग्य : लक्ष्मण लाल कर्ण
सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
० उपनिर्वाचनको मत परिणामले के संकेत गरेको छ ?
— राजपा नेपालले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिएको थियो । संघीय संसद र प्रदेश संसदको खाली रहेको ठाउँमा भाग लिएको थिएन । स्थानीय तहमा स्थानीय समस्या नै बढी हुन्छ र राजनीतिक समस्या कम हुन्छ । त्यसकारणले हामी कुनै ठाउँमा हा¥यौं भने कुनै ठाउँमा जित्यौं । हामीले खोजेजतिको परिणाम नपाए पनि सन्तोषजनक नै छ ।
० तपाइँहरूले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम आएन ?
— हाम्रो परिणाम सन्तोषप्रद नै छ । एउटा गाउँपालिका अध्यक्षमा राजपाले गुमायो । बाँकी परिणाम त ठिकै छ ।
० पिपरा गाउँपालिका किन गुम्यो त ?
— जनताको मत हो, चुनावमा जनताले जे परिणाम दिन्छ त्यसलाई स्वीकार गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले पनि त राम्रै मत पाएका छौं, हाम्रो मत त कम भएको छैन । तर, जित्न सकेनौं । चुनावमा जीतहार त हुन्छ नै, यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन ।
० चुनावी समीक्षा राजपाले किन गरेन ?
— हामी केही सीमित ठाउँमा मात्र चुनाव लडेका थियौं । यसमा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता लागेका थिए, यसलाई हामीले सामान्यरूपमा नै लिइरहेका छौं, प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छैनौं । स्थानीय तहमा हामीले प्रतिस्पर्धा गरेका थियौं, केही ठाउँमा हा¥यौं भने केही ठाउँमा जित्यौं । यो कुनै ठूलो निर्वाचन थिएन कि जसलाई समीक्षा नै गर्नुपर्छ । त्यसकारण, समीक्षा गर्नुपर्ने कुनै खास कारण छैन ।
० केही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पदरिक्त हुँदैछ, राजपाका पनि दुई जना सांसदको समयावधि सकिँदैछ । राष्ट्रियसभा चुनावका विषयमा के हुँदैछ ?
— राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि अहिले बाँकी नै छ, आजैदेखि खाली मानेर कसरत गर्ने होइन । पहिला पदरिक्त होस्, चुनावको प्रक्रिया सुरू हुन्छ त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्छ ।
० अहिले त्यो विषय राजपाका लागि प्राथमिकतामा छैन ?
— अहिले नै किन त्यो विषयमा बहस गर्ने ? अहिले हाम्रा पार्टीबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य छँदैछन्, पदावधि बाँकी नै छ भने आजैदेखि त्यो विषयमा सोच्नुपर्ने कुनै बाध्यता नै छैन ।
० संघीय संसदको सभामुख पद अहिले रिक्त छ, राजपा नेता महन्थ ठाकुर ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले उहाँको पनि चर्चा छ । राजपाको के धारणा ?
— सभामुख बन्ने भनेको ५०+१ ले हो । हाम्रो पार्टीको उपस्थिति त्यस्तो छैन । त्यसकारणले राजपाले सभामुख पाउनुपर्छ भन्ने कल्पना गरेको छैन । जहाँसम्म ठाकुरजीको कुरा छ, उहाँले कतै भन्नुभएको छैन कि म सभामुख बन्छु, न अन्य कुनै पार्टीले त्यस्तो चर्चा गरेको छ । अब कसले कहाँ–कहाँ गर्छ, त्यो हल्लाको पछाडि त हामी लाग्ने होइन नि ।
० ठाकुरजी सभामुख बन्ने चर्चामा कुनै सत्यता छैन ?
— यो हल्ला मात्रै हो । दुई÷चारवटा अनलाइन मिडियाले जे मन लाग्छ त्यो लेखिदियो भने त्यसको आधिकारिकता के त ? केही आधिकारिक प्रमाण त हुनुपर्छ नि ।
० यदि राजपालाई सभामुखको प्रस्ताव आयो भने ?
— यदि राजपालाई सभामुख दिने प्रस्ताव आयो भने पार्टीमा छलफल गर्छौं । यदि आउँछ भने यदि सोच्छौं । छोरा जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ त्योभन्दा अगाडि नै नाम राखेर हिंड्ने हो भने यो राजनीतिक कुरा भएन ।
० तपाइँहरूले उठाउँदै आएको मागका विषयमा मौन देखिनुभएको छ नि ?
— हामी त दुई वर्षदेखि संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताका लागि संसदमा लडिरहेका छौं । हामी आफ्नाका लागि काम गरिरहेका छौं, हामी मौन बसेका छैनौं । आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म त्यसमा प्रयास गर्छौं । त्यसै कारण हामी विपक्षमा पनि बसेका छौं ।
० राजपाको महाधिवेशन मिति दुई–दुई पटक असफल भइसक्यो, महाधिवेशन तयारीको अवस्था के छ त ?
— महाधिवेशनको समय दुई चोटि सारियो यो सत्य कुरा हो । पार्टीले महाधिवेशन गर्नैपर्छ त्यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । अहिले जिल्ला–जिल्लामा तदर्थ समितिहरूको निर्माण भएका छन्, अधिवेशन प्रक्रियामा अगाडि बढेको होइन । अधिवेशन प्रक्रिया अर्को हुन्छ, समिति निर्माण अलग प्रक्रिया हुन्छ । निर्देशिका तय गरेर अहिले हाम्रो पार्टीले वार्ड, गाउँपालिका, नगरपालिका, क्षेत्रीय र जिल्लामा तदर्थ कमिटी निर्माण गर्दैछ । यो अधिवेशनको तयारी होइन, त्यसका लागि त सक्रिय सदस्यता बाँड्नुपर्ने, प्रतिनिधिहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कामहरू अहिले सुरू भएको छैन । महाधिवेशनबाहेक पार्टीको जीवनमा अन्य कुनै घटना महत्वपूर्ण हुनसक्दैन । पार्टीलाई जीवन्त राख्ने सबभन्दा ठूलो उपाय नै महाधिवेशन हो । तर, अहिलेसम्म हुनसकेन यो दुर्भाग्य हो ।
० महाधिवेशनका लागि आफैले तोकेको दुई–दुई चोटिको मितिमा हुनसकेन, किन ?
— कारण एउटै हो, हामीले गरेनौं । हामीले दुईचोटि महाधिवेशनको मिति तय ग¥यौं, क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढेको भए आज भइसकेको हुन्थ्यो । क्यालेन्डर बनेन, काम भएन ।
० भनेपछि नेतृत्वपंक्तिले नै महाधिवेशन गर्न चाहेन ?
— पार्टीको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने, ६ पार्टीको अध्यक्षमण्डल छ, समयमा महाधिवेशन भएन भने आखिर जिम्मेवारी ६ जनाले नै लिनुपर्छ ।
० महाधिवेशन हुन नसक्दा नेता कार्यकर्ताहरूमा व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको हो नि ?
— खासगरी अध्यक्षमण्डले गर्दा समस्या देखिएको हो । जिल्ला–जिल्लामा पनि यही समस्या थियो । तर, हामीले तदर्थ समिति बनाएका छौं । वार्ड, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्लामा अहिले हामी एकल नेतृत्वमा अगाडि बढेका छौं । निश्चितरूपमा पार्टी एकल नेतृत्वमा जानुपर्छ । त्यसका लागि बाटो भनेको त्यही महाधिवेशन नै हो । नेतृत्व र नीति चयन र विधान परिमार्जन महाधिवेशनबाट नै हुन्छ । त्यसकारण महाधिवेशन नितान्त आवश्यक हो ।
० तर, महाधिवेशनप्रति नेतृत्व किन गम्भीर देखिदैन ?
— नेतृत्वले त केही काम अहिले प्रारम्भ ग¥यो नि । अहिले तदर्थ समिति निर्माण गर्ने काम सुरू भयो, एउटा संरचनामा आएको छ । ६ जना अध्यक्षका कारण जिल्लामा जुन द्वन्द्व थियो त्यो त समाप्त भएको छ ।
० समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणका लागि लामो समयदेखि चर्चा चल्दै आएको छ, यो एकता चर्चाले पनि महाधिवेशनलाई प्रभावित गरेको हो कि ?
— एकताको कुरा त माथि–माथि बसेका नेताहरूबीच मात्रै छ, तल–तल कुनै कुरै चलेको छैन । एकता भयो भने राम्रो हुन्छ, जनताको अपेक्षा पनि त्यही हो । तर रातारात एकता हुने कुरा होइन । किनभने पार्टी एकतामा नेतृत्व र नीतिको कुरा पहिले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई पार्टीको नीति के रहने, एजेन्डा के रहने, नेतृत्व कुन किसिमबाट समायोजन गरेर अगाडि बढ्ने यी कुराहरू टुंगो दुई÷चार दिनमै लाग्दैन । यो एउटा प्रक्रिया हो । त्यसले महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न सक्दैन ।
० तर, एकताकै चर्चाले महाधिवेशनमा जुट्न नसकेको गुनासो पनि छ नि ?
— एकताकै चर्चाले महाधिवेशन हुन सकेन भन्ने कुरा होइन । दुईचोटि एकताको चर्चाले महाधिवेशन प्रभावित भएको होइन । तर, तेस्रो मिति किन तय भएन यो महत्वपूर्ण कुरा हो । महाधिवेशन गर्नैपर्छ, अर्को उपाय नै छैन ।
० पहिला एकता गरौं, त्यसपछि महाधिवेशन जाऔं भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ ?
— पार्टीमा धेरै किसिमका नेताहरू छन्, सबैले आआफ्नो धारणा राख्दैछन् । तर, पार्टीको त्यसमा आधिकारिक निर्णय छैन । जसको मनमा जे लाग्यो त्यो बोलेका होलान् । त्यो पार्टीको धारणा हुँदैन ।
० राजपाले समाजवादीसँग एकताका लागि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने शर्त राखेको छ, यसले एकतामा ढिलाई भइरहेको हो ?
— यस्तो कुरा कसले गर्छ, कहाँ बोल्छ यो मलाई थाहा हुँदैन । पार्टी एकता गर्ने हो भने हामी विपक्षमा बसेका छौं भने तपाइँ पनि एउटै पोजिसनमा उभिनुस् भन्ने धारणा आफ्नो ठाउँमा होला । तर, तिमी आजै गर भोली नै गर्छौं भन्ने कसैले त भनेको छैन नि । समाजवादी सरकारमै रहेकोले एकता भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन ।
० तर, राजपाका संयोजक राजेन्द्र महतोले नै यस्तो कुरा भन्नुभएको हो नि ?
— यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुस्, राजेन्द्रजी पार्टीको पनि संयोजक हुनुहुन्छ र वार्ता समितिको पनि । जुन बेला समाजवादीसँग एकताको कुरा चलेको थियो, त्यतिबेला पनि समाजवादी सरकारमै थियो । त्यसकारणले सरकारमा रहेकाले एकता हुँदैन भन्ने कुरा उहाँको व्यक्तिगत सोच हो । तर, सकारबाट बाहिर आउने कुरा त समाजवादीको हो । हामीलाई त्यो कुरा रूच्दैन भने हामी मिल्दैनौं । सरकारमा बस्नु वा बाहिर आउनु दोस्रो कुरा हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको हामी मधेशकेन्द्रित दल हौं र यसलाई पहाडसम्म पु¥याउन खोजिरहेका छौं ।